Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » Socdaalka Mareykanka: Xayiraadda socdaalka ee Midowga Yurub waa niyad jab
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Socdaalku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqaalaha adduunka wuxuuna lagama maarmaan u noqon doonaa in si buuxda looga soo kabto burburkii dhaqaale ee masiibada.
Komishanka Yurub wuxuu ku taliyaa xannibaadaha socdaalka ee socdaalayaasha Mareykanka ee EU.
Wadamo badan oo ka tirsan Midowga Yurub waxay la kulmeen kor u qaadida booqashooyinka soo gala xagaaga.
Socdaalka Mareykanka wuxuu ku dhiirigelinayaa Midowga Yurub inay u sii furnaadaan dadka Mareykanka ah ee la tallaalay.
Ku -xigeenka Fulinta Ururka Socdaalka Mareykanka ee Arrimaha Dadweynaha iyo Siyaasadda Tori Emerson Barnes ayaa soo saaray bayaankan soo socda news in Midowga Yurub uu ku talinayo in laga saaro Maraykanka liiska dalalka ay tahay in xayiraadaha socdaalka laga qaado:
“Tani waa horumar niyad -jab leh ka dib markii ay kor u kacday booqashada gudaha ee socdaalayaasha la tallaalay oo dalal badan oo Midowga Yurub ah soo mareen xagaagan. Waa dib -u -dhac in kasta oo la qaatay tallaaladii - aalad aad wax ku ool ugu ah noocyada kala duwan - kuwaas oo ku soo kordhaya labada dhinac ee Atlantic.
“Socdaalku waa qayb muhiim u ah dhaqaalaha adduunka wuxuuna lagama maarmaan u noqon doonaa in si buuxda looga soo kabto burburkii dhaqaale ee masiibada. Safarka Mareykanka wuxuu ku dhiirri -gelinayaa Midowga Yurub inuu u sii furnaado dadka Mareykanka ah ee la tallaalay, sidoo kale wuxuu ku boorinayaa Mareykanka inuu qaado tallaabooyin deg -deg ah si loo bilaabo soo dhaweynta shaqsiyaadka la tallaalay iyo soo celinta dhaqaalaheennii safarka. ”
Saraakiisha Midowga Yurub maanta lagu taliyey si loo hakiyo dhammaan safarada aan muhiimka ahayn ee ka imanaya Mareykanka iyadoo tirooyinka cusub ee COVID-19 ee Mareykanka ay soo bateen.
Maanta ogeysiis Golaha Yurub wuxuu u dhigmaa talo soo jeedinta 27 -ka dal ee ku bahoobay ururka, kuwaas oo farsamo ahaan u haysta madaxbanaanida xuduudahooda.
Michael K. wuxuu leeyahay,
September 9, 2021 at 14: 15
Waa hagaag, Mareykanku wuxuu ku soo rogay xaddidaad isku mid ah (kahor inta UE aysan sameyn) socotada reer Yurub tan iyo bilowgii sanadkii hore, welina waa halkeedii.
Labada dhinacba waa niyad jab.
Susan Sheats wuxuu leeyahay,
Ogosto 30, 2021 markay tahay 16:42
hmmm… Waxaan moodayay inay tahay talo kaliya oo wadan walba maareyn karo sida ay u arkaan taam. Talyaanigu wuxuu mar hore amar ku bixiyay in si buuxda loo tallaalo, waji -xidhka dhammaan goobaha dadweynaha iyo tijaabooyinka xun ee covid -ka. Haddii waddamada kale ay qaataan tilmaamahaas, labadooduba waxay noqon doonaan kuwo macquul ah oo caawinaya xaqiijinta nabadgelyada qof walba. Ogeysiiskan waxaa loo rogi karaa mid wanaagsan oo loogu talagalay socotada damiirka leh iyo farriinta kuwa diida inay tixgeliyaan badbaadada dadka kale inay gurigooda joogaan.